मन्त्री हेरफेरको छुट्टाछुट्टै कसरत (को-को पुगे बालुवाटार र खुमलटार ?) - Nepal's Digital News Paper
मन्त्री हेरफेरको छुट्टाछुट्टै कसरत (को-को पुगे बालुवाटार र खुमलटार ?)
काठमाडौ । नेकपा दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्री हेरफेरको अन्तिम कसरतमा जुटेका छन् । सरकारले गति लिन नसकेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना भइरहेका बेला दुई अध्यक्ष मन्त्री हेरफेरको कसरतमा जुटेका छन् ।
बुधवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वएमाले निकटका प्रभावशाली युवा नेताहरुसँग मन्त्री हेरफेरका बिषयमा छलफल गरेको स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार बोलाएर तीन युवा नेतासँग छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि नेकपा नेता योगेश भट्टराई, पार्वत गुरुड र महेश बस्नेत प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । तीन नेतासँग प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री हेरफेरका बिषयमा छलफल गरेको स्रोतले बताएको छ । सरकारलाई गतिदिन योगेश, पार्वत र महेश बस्नेतलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन् । वरिष्ठ नेता माधव नेपालले सरकारलाई गतिदिन सक्ने र आफुलाई अनुकुल हुने सांसदलाई मन्त्री बनाउन ओलीलाई सुझाव दिइसकेका छन् ।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पूर्वमाओवादीका प्रभावशाली नेताहरुलाई बोलाएर निवासमा छलफल गरेका छन् । पूर्वमाओवादीका तीन प्रभावशाली नेताहरु जनार्दन शर्मा, प्रभु साह र देवेन्द्र पौडेल प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए । यी तीन नेतालाई मन्त्री बनाउने पक्षमा प्रचण्ड पुगेका छन् । तीन नेतासँग दुई घण्टा प्रचण्डले छलफल गरेको स्रोतले बताएको छ ।